Nin waayeel ah oo gurigiisa laga qayaamay | Somaliska
Lamaane waayeel ah ayaa lagu eedeeyey in nin kale oo waayeel 92 sano jir ah ay ka qayaameen gurigiisa iyo dhaxalkiisa. Ninkaan waayeelka ah oo la sheegay in uusan maskax ahaan wanaagsaneyn ayay lamaanahaan ka dhaadhiciyeen in uu u saxiixo gurigiisa iyo dhaxalkiisa. Lamaanahaan ayaa ka dib markii uu ninka waayeelka ah uu gurigiisa u saxiixay oo uu degey goobka dadka waayeelka lagu xanaaneeyo ayay gurigii iibsadeen ayagoo kala baxay lacag dhan 365,000 kronor. Lamaanahaan ayaa horey u daryeeli jiray ninkaan ayagoo ku caawin jiray adeega ayagoo intaas ka dib la wareegay maamulka dhaqaalihiisa. Maamulaha goobta lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo uu ninkaan ku jiro ayaa la xiriiray booliska ka dib markii uu ka shakiyay lamaanahan.
Lamaane waayeel ah ayaa lagu eedeeyey in nin kale oo waayeel 92 sano jir ah ay ka qayaameen gurigiisa iyo dhaxalkiisa. Ninkaan waayeelka ah oo la sheegay in uusan maskax ahaan wanaagsaneyn ayay lamaanahaan ka dhaadhiciyeen in uu u saxiixo gurigiisa iyo dhaxalkiisa.
Lamaanahaan ayaa ka dib markii uu ninka waayeelka ah uu gurigiisa u saxiixay oo uu degey goobka dadka waayeelka lagu xanaaneeyo ayay gurigii iibsadeen ayagoo kala baxay lacag dhan 365,000 kronor.
Lamaanahaan ayaa horey u daryeeli jiray ninkaan ayagoo ku caawin jiray adeega ayagoo intaas ka dib la wareegay maamulka dhaqaalihiisa. Maamulaha goobta lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo uu ninkaan ku jiro ayaa la xiriiray booliska ka dib markii uu ka shakiyay lamaanahan.